XOG: Farmaajo & Sanbaloolshe oo laba Musharax midkood ka dhigaya M/weynaha Cusub ee Hirshabeelle… | Caasimada Online
XOG: Farmaajo & Sanbaloolshe oo laba Musharax midkood ka dhigaya M/weynaha Cusub ee Hirshabeelle…
Sep 12, 2017 - Comments off
Dowlada uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Abdillahi Farmaajo ayaa waxaa iminka kusoo baxay fadeexad ballaaran oo la xiriirta qorshaheeda ku aadan doorashada Madaxweynaha ee Hirshabeelle, kadib markii ay qabiilka Xawaadle ka dhex abuureen colaad hor leh.
Taliyaha nabadsugida dowlada Soomaaliya oo ah shaqsi qabyaalad iyo fudeyd isku darsaday ayaa bilaabay in Farmaajo ka dhaadhiciyo in laba nin oo ilmo adeeradiis ah mooyee musharixiinta kale ee Xawaadle meesha laga saaro, isagoona si gaar ah ugu gudbiyey in la taageero Dahir Abdulle Cawaale iyo Abdi Farax Laqanyo, oo labadaba ah rag aan hoggaamin siyaasadeed laheyn.
” Farmaajo waxa uu dadka deggan Hirshabeelle la rabaa burbur joogta ah, isagoona bilaabay inuu qabyaalad qayaxan kala dhex dhigo dad wada dhashay, iyaddoona taasi ka dhigeysa hoggaamiye fashil u joog ah” ayuu yiri Maxamed Ali Nuur, oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Jowhar.
Dhinaca kale , waxaa uu sheegay in dadka hirshabeelle ay diyaar u yihiin ka tashiga shirqoolka ay usoo maleegayaan Farmaajo iyo Sanbalolshe, waxaana xildhibaanada hirshabeelle ka go’an inay dadka u dooraan shaqsi dadka deegaanka guul u horseedi kara.
Dowlada ayaa siyaasiga Cali Ware saartay cadaadis xoogan, maadaama uu yahay siyaasi saameyn ballaaran ku leh Hirshabeelle , gobollada kale ee Soomaalida iyo mida beesha caalam kaba.
“Cali Ware , waa rajada kaliya ee u hartay Hirshabeelle, waxaana uu horey u noqday Musharixii doorashada Madaxweyne kula tartamay Cali Cabdulahi Cosoble, iyaddoo dowladii markaasi jirtayna ay dagaal la mid ah midka dowladan cusub ku heyso lagu qaaday, haddana waxaa uu muujiyey biseylkiisa siyaasadeed, oo kama quusan wax u qabadka shacabkiisa” ayuu yiri Nabadoon Muuse Janaqow.
Jowhar ayaa ah meeshii ay kasoo bilaabatay kelmada caanka baxday ee aheyd ” Ar Farmaajo iigeeya” , taasi oo muujineysay rajada ay dadka Hirshabeelle ka qabeen Farmaajo, haddase taasi waxaa uu Madaxweynaha ugu baddelay rajo tir iyo la dagaalanka hoggaamiyayaasha dadkaasi horumarka u horseedi lahaa